महिनावारी भएको बेला पुजापाठ गर्न..,मन्दिर जान हुन्छ कि हुँदैन ? एक पटक अवश्य पढ्नुस् ! « गोर्खाली खबर डटकम
२०७७ मङ्सिर २३ गते मङ्गलवार प्रकाशित
महिनावारी हुदा हिन्दु समाजमा मन्दिर प्रवेश नगर्नु भनेको छैन । पर बस्नु भनिन्छ । यो महिनावारीमा दिएको छुट्टी हो । तिम्रो शरीर बाट रगत जादा तिमि कमजोर हुन्छौ भनेर आराम दिएको छुट्टी हो । प्राचीन संस्कारको संस्कृती पछाडीको ज्ञान हेर्ने गरौ। महिनावारीमा तिमी कोहि एक भन्दा अपवित्र हुदैनौ । मन्दिर भन्दा पवित्र हुन्छौ । मन्दिर भन्दा संवेदनशिल ( sensitive ) हुन्छौ ।
पिरियडमा मन्दिर नजानु भनेको पुरातन समाजमा मन्दिर टाढा हुन्थे । फेरि मन्दिर जानू भनेको मन्दिर गएर नमस्कार गरेर फर्कनु मात्र थिएन । मन्दिर निराहार शुद्ध भएर जाने गरिन्थ्यो । महिनावारीमा मन्दिर निराहार निर्जल जादा घण्टौ साधना गर्दा तिम्रो स्वास्थ्यमा असर पर्छ तिमी झन कमजोर हुन्छौ भनेर मन्दिर नजाउ भनिएको हो ।
कालान्तरमा यो निषेधको रुपमा बुझियो । भारतमा काम्ख्या मातालाई नै पिरियड हुन्छ । हिन्दु समाजमा नारी देवि हुन् । यदि नारीले हिन्दु धर्म संस्कार संस्कृती जोगाउन नसके एउटा युग गुमाउनेछन् । तिमी महिनावारीमा अछुत वा अयोग्य हुदैनौ तिमी मन्दिर भन्दा पवित्र हुन्छौ ।
मन्दिर बनाउने मान्छे जन्माउने पनि तिमी/नारी हौ । तिमी जुनसुकै बेला मन्दिर जान सक्छौ । किन नजान भनियो फरक कोणबाट हेर्न सक्छौ । हिजो कुन अभ्यास थियो त्यसलाई जानेर बुझेर मात्र प्रश्न गर । राम्रो लागेमा अवश्य शेयर गर्नुहोला । नर्स नेपालबाट
तिब्बती बालबालिकाहरुलाई दलाइ लामाबारे अध्ययन गर्न चिनियाँ प्रतिबन्ध